‘शत्रु गते’ को सेटमा भूत ! प्रियंका बेहोस::kamananews
काठमाडौं । मंसिर ३ गते चलचित्र ‘शत्रु गते’ वीरगञ्जको जितपुरमा छायांकन भैरहेको थियो । विवाहको दृश्यका लागि भब्य मन्डप तयार पारिएको थियो । चलचित्र छायांकन भैरहेको थियो । चलचित्रका अधिकांश कलाकार छायांकन स्थलमै थिए । नायिका प्रयंका कार्की पनि सेटमै थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो फ्यान फलोइङ भएकी प्रियंका जहाँ गयो त्यहीँ सेल्फी खिचेर पोष्ट गरिहालिछन् । विवाहको भब्य सेटले उनलाई लोभ्यायो । इन्टाग्राम अन गरिन् र सेल्फी खिचिन् । फोटोको बीचमा एमानको सेतो मान्छे जस्तो ब्यक्ति आयो । उनले दोहोर्याएर सेल्फी खिचिन् । उनको फोटोसँगै त्यही सेतो मान्छे आयो । सँगै रहेकी नायिका आँचल शर्मालजाई उनले आफ्नो सेल्फीमा आएको तस्बिर देखाइन् । आँचलले पनि इन्टाग्रामबाट सेल्फी लिइन् । उनको सेल्फीमा पनि त्यही सेतो ब्यक्ति आयो ।
“एक कान दुइकान मैदान भयो । केही स्थानीयले भगवान रिसाएर भूत प्रकट भयो भने, अब अनिष्ट हुन्छ भने । यस्तो कुरा सुनेर प्रियंका बेहोस भइन्,” ‘शत्रु गते’का निर्देशक प्रदीप भट्टराई उक्त घटना सम्झँदै भन्छन्, “केही भने ठिक उल्टो भगवान खुसी भएर प्रकट भए । चलचित्र राम्रो हुन्छ भन्न थाले । बेहोस भएकी प्रियंकाललाई होसमा आउन निकै समय लाग्यो । कसैले भूत कसैले भगवान भन्न थालेपछि सुटिङ रोकियो । वास्तविकता के हो अन्योल भयो ।”
न थियो भूत न थियो भगवान । रहस्य भोलीपल्ट विहान खुल्यो । नायक पल शाहले पत्ता लगाए त्यो दिन इन्टाग्रामले दिएको फिचर रहेछ मान्छे जस्तो देखिने सेतो आकृति ।
चलचित्र ‘शत्रु गते’ यही शुक्रबारबाट अल नेपाल प्रदर्शन हुँदैछ ।
बुध, चैत्र ७, २०७४ मा प्रकाशित
विश्वका कान्छा निर्देशक सौगात विष्ट निर्देशित ‘हैरान’ को ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौँ । फिल्म ‘हैरान’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । विश्वका कान्छा निर्देशक सौगात विष्ट निर्देशित ‘हैरान’ दोस्रो फिल्म हो । फिल्मको गीत रिलिज गरिएको केही दिनमै फिल्मको टिजर रिलिज गरिएको हो । फिल्मको रिलिज्ड टिजरमा...
हलवालाहरुको राजनीति र हेपाईले गर्दा म दुखि छु ” नेप्टे निर्माता रोहित रुम्बा
काठमाडौं । गत शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको फिल्म ‘नेप्टे’का निर्माता तथा कलाकार रोहित रुम्बाले आफूलाई हलवालाहरुले हेपेको बताएका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको गर्दै निर्माता रुम्बाले आफ्नो फिल्मले ५६ हल पाएको तर ती हलमा शो...
आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखी यसरी बचाएका थिए अक्षय कुमारले ऐश्वर्या रायलाई
काठमाडौँ । अक्षय कुमार खुल्ला मन भएका अत्यन्तै स्पष्टवादी व्यक्ति हुन् र उनीसँग हरेक मुश्किललाई सजिलै निपट्न सक्ने खुबी रहेको छ । खेलाडी अक्षय कुमार पर्दामा प्रशस्तै खतरनाक स्टन्टहरु देखाउने गर्छन र उनको यो एक्सन...
स्क्रिनमा देखिएका स्टार तपार्ईका लागि आदर्श लाग्न सक्छन् । तर, यदि यी सेलेब्सको वास्तविक जीवनबारे थाहा भयो भने तपाईलाई उनीहरुप्रति घृणा जाग्न पनि सक्छ । सिनेमा, टेलिभिजन र सामाजिक इभेन्टसमा सभ्य लाग्ने सेलिव्रेटीको बानीमा...
“सब गलत हो मलाई गाउन नदिने भन्ने कुरा सत्य हैन” गायिका ज्योति मगर
पछिल्लो समय मिडियामा आएको कुरा गलत हो भन्दै ज्योति मगरले खण्डन गरेकी छिन । केहि दिन अघि हामीले उनको म्युजिक भिडियो “स्याल कुखुरी” को सुटिंग समय गरेको भिडियो अन्तर्वार्तामा उनले गीत संगीतको क्षेत्रको बारेमा...
ह्यात ग्राउण्डमा २५ रुपैयाँमा भेट्न पाईने भयो गायक राजु लामा लाई / भिडियो सहित
पाली सांगीतिक क्षेत्रको चर्चित ब्याण्ड ‘मंगोलियन हर्ट’ २५ रुपैयाँमै हेर्न पाइने भएको छ । ‘उभोउभो खासा म जाँदा’, ‘नतानुँ त तानुँतानुँ लाग्ने’, ‘बादल पारिको देशबाट’जस्ता गीतमार्फत श्रोता तथा दर्शकको मनमटुमा बस्न सफल ‘मंगोलियन हर्ट’ले २५...
गुल्मेली गायक तथा सर्जक रामु जि सि को शब्द रचना मा भर्खर बजार नंया गित आश्रम l भिडियो
बैशाख ५ काठमाडौं नेपाली लोक गित सङ्गित को क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई सक्नु भएका गुल्मेली गायक तथा सर्जक रामु जि सि को शब्द रचना मा भर्खर बजार नंया गित आश्रम नामक लोक दोहोरी...
मोडलिंग संगै निर्देशनमा सिर्जनाको फड्को – हेर्नुहोस, (भिडियो सहित)
बैशाख ०५, काठमाण्डौ – दर्जनौ भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरेर चर्चा बटुल्दै गरेकि मोडल सिर्जना पौडेलले निर्देशनमा समेत पाईला चाल्दै छिन । अन्जु पन्तको म संग तिमीले, प्रमोद खरेलको खै कसररी बोलाउ मैले,श्रीयशी चेम्जुंगको...
‘सिरानीसँग रोमान्स गर्थें’ अभिनेत्री आँचल शर्मा
सामीप्यराज तिमल्सेना ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेकी हुन्, अभिनेत्री आँचल शर्माले । पहिलो फिल्मबाट औसत प्रतिक्रिया पाएकी आँचल दोस्रो फिल्म ‘जोनी जेन्टलमेन’ले भने आफूलाई राम्री अभिनेत्रीको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा विश्वस्त...
भित्री बस्त्र कति महँगा लगाउँछन् नेपाली सेलिब्रेटी ? – पढ्नुहोस्
सामान्यतया अरूलाई देखाउन र आफ्नो पर्सनालिटीका लागि मान्छेहरू महँगो कपडा लगाउँछन् । तर, बाहिरी कपडाहरू मात्र होइन, भित्री कपडाहरू पनि महँगा र ब्रान्डेडमै मोह बढ्दै गएको छ । ५ हजार रुपैयाँसम्मका अन्डरवेयर र १० हजार रुपैयाँसम्म...